Shiinaha gadaal hagaajiye hagaajiye garabka garabka suunka suunka iyo alaabada | AoFeiTe
Cabir:SML XL XXL, Dhabarka Brace
Midabka:Casaan, Cadaan, Madoow, Cadaan, Madoow, Casaan
Magaca Product:Dib-u-hagaajinta Saxeexa Garabka Garabka Suunka
Baakadaha:1 pc / opp boorso
Wax soo saarka:60000 Cadad / Cadad Bil kasta
Kartida Bixinta:60000 Cadad / Cadad Bil kasta
Tayo sare oo xun gadaal Taageerada Lumbarsuunka waxaa loogu talagalay in lagu taageero labada dhabarka hoose iyo kore, Jaangooyahaani wuxuu bixiyaa taageero, raaxo iyo diirimaad si loo yareeyo xanuunka. Xirashada tanTaageerada Dhabarkawaxay ku habboon tahay xanuunka dhabarka iyo garbaha oo foorara. hooseSuunka Taageerada gadaalSixitaanka Magnetic Posture hagaajintiisa waxaa kugula taliyay khubarada dhaawaca caafimaadka iyo Takhaatiirta jirka. Suunka laastikada ah ayaa ku siin doona gaashaan dheeri ah oo xasiloonida iyo taageerada ah, Kulaylka daaweynta ee ay bixiso neoprene tayo sare leh oo ay weheliso 8 magnets ayaa kaa caawin kara yareynta murqaha murqaha.
Magaca Product: Dhabarka Dambe suunka garbaha hagaajiye hagaajiye Shayga No.: AFT-B003 Waxyaabaha: Neoprene, laastik, PP strip, Garabka Garabka la hagaajin karo Midabka: Casaan, Cadaan, Madow Cabir: Unisize NW: 0.24kg / pc Dhererka: 86cm Wareeg: 42cm Xirmo: 1 pc / opp boorso, 100bags / kartoon Xajmiga kartoonka: 36 * 38 * 72cm Shahaadada: CE / FDA / ISO9001 / ISO13485
Toos u istaag, fadhiisasho iyo socod socod.
Ka hortag qallooca laf-dhabarka.
Fudud jirka jirka.
Ka qayb qaado horumarka sii kordhaya.
Dhexdaada iyo dhabarkaaga toos uga dhig.
Yaraynta xanuunka dhabarka hoose, foorarsiga iyo nabarka.
Waxaan khabiir ku nahay daryeelka caafimaadka iyo wax soo saarka lafaha sida Jilibka jilibka Support, Dhexda Back Brace Support, Joogtada saxe, Taageerada Brace Brace, Xusulka Brace Taageero, Brak lugtaTaageero, Garab istaaga Garabka Garabka, Neck Brace Support iyo wixii la mid ah. Sidoo kale mid ka mid ah adeeggayaga muuqaalku waa habeyn amar. Waxaan ku soo saari karnaa badeecado leh astaantaada naqshadeynta iyo sanduuqa midabka. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno waqti dheer!
Raadinta habboon Dib-u-habeynta DhabarkaSoo saare & alaab-qeybiye? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhamaan Garabka Taageerada Garabka Sawirka Dambe waa dammaanad tayo leh. Waxaan nahay Warshadda Asalka Shiinaha ee Dhabarka Boosta. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Gargaarka Garabka Dib-u-hagaajinta Muuqaalka
Qaab dhismeedka dhabarka sare saxeexa qallooca b ...
Dib-u-hagaajinta jaakadda taageerada taageerada hagaajinta muuqaalka b ...
Dib-u-hagaajinta Dhabarka iyo Garabka
Hoos u dhigista cadaadiska hagaajinta qaabeyaha